Lungela have some fun nale umsebenzi ezintsha ezivela IWG, Fast Buck Lucky. Njengoba leli gama lisikisela, ikuvumela uwine ezinye bucks omkhulu ngempela okusheshayo. Kukhona eyodwa noma ezimbili kodwa eziyisishiyagalolunye ngezindlela ukunqoba lapha akuzona. IWG ngubani idume ekuthuthukiseni ezinye zezindawo ezingcono kakhulu imidlalo embonini Wakhe le eyodwa futhi benzé umsebenzi omkhulu ngo-ke. Lokhu kuyatholakala cishe zonke Jackpot Slots isayithi ku-inthanethi. Ukuze ungene kuyo, konke okudingayo ukuze ukwenze nje ukungena ku-kula Jackpot Slots isayithi futhi uqale ukudlala. It Ubuye imidlalo emithathu mini akunikeza ngenye indlela ukuwina kumnyama ke. Ukuba omkhulu Yokuwina engaba kanye RTP ka 10.09% kusho ukuthi yonke £ 100 Ukubheja, uzothola emuva £ 90,90, okuyinto enkulu.
Google Fast Buck Lucky ngesikhathi jackpot Slots isayithi
It has a kungemuva elimnyama futhi zonke imifanekiso inhlanganisela nephuzi. Phezulu kulotshiwe igama layo futhi ngezansi ukuthi amatafula amathathu ahlukene banikwa. Lezi amakholomu amathathu ayizinsuku ezintathu ezihlukene mini-games. Izimbiza zegolide, Lucky Ukhamba futhi secembe clover. Ungakwazi ukuhlela ubukhulu ukubheja ngokuchofoza + futhi – mbamba kuleto letiniketiwe esikrinini. Kukhona inkinobho yokudlala inikezwe ukuqala ukudlala ke Ungayithola kunoma iyiphi Jackpot Slots isayithi futhi asebenzise izipesheli ezahlukene ukuthi unikeze abanye. Cishe zonke Jackpot Slots isayithi esekela IWG imidlalo uzokwazi ukukunikeza le slot game.
An Gameplay abathandwayo
Gameplay silula kodwa ezithakazelisayo. Ngaphambi kokuqala off, uzonikezwa ukukhetha ukusetha ukubheja futhi ungakwazi bese uchofoza ku- isiqalo. Njengoba uchofoza ukhetho DLALA uzobona imidlalo emithathu mini. Uthola kukho ezihlukahlukene Yokuwina ku zontathu lezi. Ngo umdlalo 1, Uthingo bazobuyekezelwa phendla ukukunika umklomelo irowu okuhambisanayo. Ngo umdlalo 2, une ukufanisa amanani amathathu ukuze uthole kwenani lokuwina futhi umdlalo 3 une ukufanisa 2 izimpawu kwelinye umugqa owodwa ukuze umuntu azuze umklomelo ukuboniswa irowu. Kukhona isiyonke 9 amathuba ukunqoba lo mdlalo. Ngakho ungene ku Jackpot Slots isayithi futhi uqale ukudlala.
It ingenye kakhulu amehlo elimnandi futhi sihehe phakathi kwabanye yalolu hlobo uhlobo imidlalo. Ungakwazi kalula ukunqoba imali eningi bese nijabula ngenkathi edlala ke. Ingxenye best ukuthi kutholakala kalula kunoma iyiphi Jackpot Slots isayithi abadlali.